Inkukhu ebhange in juice ayo: ukupheka iresiphi
Bewazi yini ukuthi inkukhu embizeni, e siqu juice nezitini yayo, indlela emangalisayo kugcina yonke ukunambitheka kwako? Futhi Into eyangimangaza kunazo zonke e ukupheka - ukungabi khona noma yiluphi uhlobo kwadingeka izinongo kanye marinade. Ake futhi sizobe isidlo esilula futhi unempilo kakhulu.
Inkukhu ebhodweni: iresiphi nge onion
Ukulungisa ukudla, sidinga ahlanzekile ezomile litre imbiza kwensimbi noma ingilazi isivalo. Futhi nangu uhlu imikhiqizo okudingekayo zokupheka:
abasha inkukhu izingcezu isikhumba - 600g;
Bow-itheniphu - 1 ikhanda;
Okokuqala thina kuyokwembula imfihlo yokwenza izicucu. Sika isidumbu okuphekiwe izingcezu ezincane kakhulu akufanele kube. Ucezu emikhulu iyoba, ngcono ngeke ukugqama juice ngesikhathi ukupheka. Isikhumba akufanele zisuswe noma kunjalo, futhi ngemva ukugeza izidumbu kumele kube eyomile ekhishini ephepheni. Inketho kangcono 3 ukudla kungaba kwamathanga inkukhu, unciphe ngesigamu. Izimfihlo kukhethwa inyama, sithole, futhi manje wazi indlela ukupheka inkukhu ebhodweni.
Lapho ekuqaleni sihloko okukhulunywa ukuntuleka izinongo kanye marinade, it is hhayi kwakusho ukungabi khona emnyama eziningi ezinengqondo. Nokho, noma yimuphi izinongo ezengeziwe bangambulala ukunambitheka acwebile inkukhu inyama, kungalokho ngaphandle-add-on. Ngakho, izingcezu cut inkukhu usawoti kanye pepper. Encane futhi fresh inkukhu, Izithako ezincane ngesimo imifino idinga. Ngakho-ke, inkukhu yethu ebhodweni eliphekwe juice ayo, ukwengeza anyanisi eyodwa nje namanzi. Lokhu kuyoba inhlanganisela ephelele ukunambitheka. Onion cut semicircles futhi uqhubekele laying izithako.
Asiqale kunalokho ezinabantu embondelene Imi izingcezu inkukhu embizeni, nese onion. Amanzi embizeni isipikili up akunakwenzeka! It uhlala ukuze zimboze ukulungele tin esitsheni noma lid ingilazi wafaka okuqukethwe ku oven abandayo. Shisisa broiler yenu kuyovumelana kancane kancane ukuze emaphaketheni akuyona waphula. Inkukhu yasebhange in juice ayo futhi ingalungiswa besebenzisa "aerogrill" imisebenzi eyengeziwe ehlanganisa ukubeka iringi olwandisa. Manje uhlala ukusetha lokushisa degrees 180, bese ulinda 1 ihora nemizuzu engu-20. Okubalulekile: Musa shisisa ngaphezu yalezi lokushisa kuhhavini ukugwema ukwakheka imifantu ebhange. Uma usebenzisa umsebenzi "aerogrill", ujike isimo fan at ngesivinini esingamakhilomitha.
Ngemva kwesikhathi, inkukhu embizeni, iphekwé juice ayo, kufanele nime kuhhavini imizuzu engu-15. Lokhu kwenziwa ukuvimbela ebukhali lokushisa iconsi. Akukho ukwenza, ingilazi iziqukathi - into ezingezwakali. ukuthi kuphela akusiwona wonke umehluko wemisindo nemiqondo yamagama, ngoba thina kusadingeka ume ngaphansi stock esishisayo. Ayikho imininingwane ngenhloso ngaphandle ezibandayo - futhi isidlo kuyoba baphephile futhi baphilile. Nokho, ungakwazi manje shift tincetu asanda namanzi e isidlo futhi ujabulele ukudla kwakho.
Step by step recipe ngezithombe: inkukhu ebhodweni nge nemifino
isidlo Langaphambilini kunjalo oludonsa ukuthi kubalulekile ukuba badle ngaphandle Hlobisa. Manje zicabange e yakho enkantolo omunye iresiphi, okuphelele nge imifino. Dish okuphekiwe ngale ndlela, unike imifino yonke inyama namanzi. Nansi uhlu oluphelele izithako adingekayo:
inkukhu kwamathanga - 2shtuki;
amazambane Fresh - 300 g;
onion, itheniphu - 1 isiqeshana;
izaqathe ezincane - 1 pc;
Ukulungisa ukudla, sidinga 2 isigamu-litre (noma ilitha) amathini, Ngakho-ke, ukuze uthole servings ezimbili kakhulu. Kwamathanga posochnee kahle ukukhetha, esikhundleni kubo at intando, ungasebenzisa umlenze aphansi noma amaphiko.
kungasali nelincane imifino
Okokuqala, sizobe ageze futhi asule inyama izicucu, usawoti kanye pepper kubo. Ake okhalweni kancane ukuba afuthwe ngesibulali-usawoti, singakafiki usike imifino. Uyohlanza bese uhlanza amazambane (4 Izinto ezincane), u-anyanisi kanye izaqathi. Qoba anyanisi bese sibeke eceleni cishe ingxenye yesithathu yabantu. Izaqathi cut iyoba evamile ukujiya semicircles. Inkukhu nemifino ebhange awukwazi ukubekezelela izithako ogayiwe, ngakho zonke izingcezu kufanele kube ngokwanele ezinkulu. Sizokwenza usike amazambane zibe tincetu futhi uthathe izithako zisakazwa amabhange. Ngo inqubo laying isidingo ukuqinisekisa ukuthi inani izithako bobabili amabhange kwaba cishe kulingana.
Beka izithako amabhange
Ezansi amathini lokuqala owabeka iningi anyanisi oqotshiwe, bese izaqathe. Ngokushesha ngemva ungqimba amazambane isanqante. Gcwalisani izimbiza ukuze tincetu isigamu. Manje udinga ukwengeza usawoti kanye pepper izithako bayigubungele nge lid anikine okuqukethwe kahle. Le nqubo kuyadingeka, ngoba inkukhu ebhodweni namazambane kubhakwa, kumele nombala afuthwe ngesibulali izinongo. Umfuma ukusakaza izinsalela anyanisi, okumele mbeni izingcezu inyama, kwamathanga ukunikeza ukunambitheka kwako egcwele. Sabeka izingcezu inkukhu futhi wenze isiqiniseko sokuthi indawo ishiywa ebhodweni phezulu. Ithiphu: kungcono hhayi ukuba engozini futhi usebenzise ukupheka ukudla ilitha esitsheni.
Iyathula izimbiza zensimbi zamabhodlela nomake, izingcezu ucwecwe. Ngaphambi kokuthumela okuqukethwe kuhovini abandayo, wafaka isitsha imikhiqizo ebanzi ukuthosa epanini ngaphandle isibambo. Ukuvula imodi kancane futhi ushiye izingxenye mayelana iri -1 begodu namaminithi ama-30. Ngemva kokuphothulwa inqubo ukubhaka, balandela iseluleko iresiphi lokuqala, ekujaheni ukususa isidlo eseqedile kuhovini ngqo. Ngemuva kwemizuzu engu-15, athathe bese zisakazwa a izitsha la Carte. Bon appétit!
Ezinye izincomo ukulungiswa ukudla
Leresiphi kufanelekile bonke abathandi ukunambitheka kanye aesthetics ukudla okunempilo, ngoba zokupheka zingenalo imayonnaise noma uviniga.
Kungenjalo, kungenzeka ukwengeza 2 hen lisikiwe ibe izingcwecwe eziyizingcwecwana clove sikagalikhi kanye bay leaf.
Okunye kunalawo okwethulwa zokupheka imifino izimbiza engeza iklabishi fresh, utamatisi. Njengoba kungenzeka izithako engeziwe esetshenziswa isitshalo seqanda kanye squash. Nokho, kufanele sikhumbule ukuthi izingcezu okumnandi kakhulu namakani etholwe nge okuqukethwe ubuncane imifino.
Uma amabhange hermetically ezipakishiwe entanyeni ucwecwe, ngentukuthelo ngeke kusaba khona inkukhu kwaba flavorful ikakhulukazi kanye namanzi.
Kusukela dish kuhhavini ulungela isikhathi eside, amazambane kungenziwa uthathe yizicucu ezinkulu futhi. Lolu khetho zazikujabulela ngabameli nengxenye enamandla lesintu.
Phansi amathini kuhhavini kufanele bube yizinombolo epanini noma bhaka.
Abafundi abaningi ngeke ngokushesha uqaphela esifanisweni esisenze izitsha betfulelwa inkukhu, kubhakwe kuhlanganiswe nanoma imifino izimbiza. Nokho, ukunambitheka kokudla kwethu namuhla ngokuyinhloko kuhlukile kunoma yikuphi efanayo. Futhi uyabasindisa abanomoya ukulungiselela lolu iresiphi njalo aveze ukuthi inyama eyatholakala engenakuqhathaniswa.
Indlela ukupheka kuhhavini ukuze sehhashi wewundlu? Recipe ngewundlu sehhashi
Pancake ovela ithanga: iresiphi
Apricot ujamu iresiphi
Indlela ukupheka inhlanzi jelly e ukutolika ahlukene
Hake cutlets: izindlela sokulungiselela
Recipe isobho zucchini
Biryukov Andrey - Blade Master
Winter amathayi "Nordman 4": Izibuyekezo
Ingabe izingane ukuthutha kungenzeka ngaphandle kwesihlalo ingane emotweni?
Usomabhizinisi ngamunye - ubani lo? Amalungelo nezibopho usomabhizinisi ngamunye
Ekaterina Rozhdestvenskaya: Biography kanye nokuqoqwa yangasese
Diffidence. Indlela yokunqoba ke?
Ukuthi ungakwazi ukubhala blog siqu? Ukuthembeka ukuziqaphela
Hamba-ngemuva ugandaganda MTZ: incazelo, intengo
Umcabango kanye Inkulumo
Ezokuzijabulisa e Kaliningrad: ukuzijabulisa isikhungo "kwaqala khona", epaki "Youth", ema-nightclub